एन आई सी एशिया बैंकको VISA डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड केही समयको लागि यस बैंकको ATM मेसिनहरुबाट मात्र सञ्चालन भइरहेकोमा मिति २०७६÷०६÷१८ देखि नेपाल तथा भारतका VISA नेटवर्कमा आवद्ध अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका चिप तथा पिन स्वीकार गर्ने ATM मेसिनहरुमा समेत संचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकका कार्डवाहकहरुले २४ घण्टामा नेपालमा तीन पटक गरी हरेक पटक रु २०,०००÷ का दरले अधिकतम रु ६०,०००÷ रकमसम्म झिक्न सक्नुहुनेछ । यसै गरी भारतमा २४ घण्टामा दुई पटकमा गरीे हरेक पटक भा.रु. १०,०००÷ का दरले अधिकतम भा.रु. १५,०००÷ रुपैयाँसम्म झिक्न सक्नुहुनेछ ।
यससँगै यस बैंकको डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्डहरु VISA नेटवर्कमा आवद्ध भएका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका POS(Point of Sales) मेसिनहरुमा समेत चल्ने व्यवस्था यसअघि नै मिलाइएको छ । यस बीचमा प्राविधिक कारणले आदरणीय ग्राहक महानुभावहरुमा पर्न गएको असुविधाका लागि बैंक क्षमाप्रार्थी छ ।